Rubric: Mutemo wevanhu
help pzhalsta !! ! pamusoro pemitemo yemutemo, unoda kupa mienzaniso yekuzvidzivirira kwekodzero dzevanhu ...
Iwe unogona kubvisa kudai. kana dare rakasarudza kuifunga? Dare rinofanira kudzorera chirevo chekutaura kana, kusati kwatemwa kwekugamuchirwa kwayo kwekutongwa, muchengeti akagamuchira chirevo che ...
Nzira yekupikidza mutongi mumhosva yevanhu? KUVARIDZA VAKAREI VECHINHU ZVOKUDZIDZA Kuti ave nechokwadi chekubvumirwa kwekutonga kwepamutemo uye kwakatsigirwa, zvakakosha kuti vatori vechikamu mumatongerwe enyika pamwe nehurumende uye kodzero uye basa ...
Ndezvipi zvisingabatsiri? Mamiriro avo emutemo? Vakagadzirirwa sei? Zvinyorwa zvechiremba zvakanyorerwa pamusoro peizvi, uye iwe unoda kuwana mhinduro pane purojekiti yekuvaraidza. Havana nhaka nhaka chero ipi zvayo. The Civil Code inofunga ...
Kuvhiringidza uye kusakanganiswa kwechitengesi Chii chiri musiyano? Chinyorwa 166 che Civil Code. Yakagadzikana uye haina maturo 1 zvinyorwa. Mutengo wacho hauna maturo pane zvikonzero zvakasimbiswa neCh Code, zvichienderana nekuonekwa kwacho sezviri kudare (inopikisana ...
Tingaita sei kuti tibvunze rejeri mubati wezvenhare? dumbhead))))))))) Unogona kutumira munyori panzvimbo yevashandi kana vagovana vane zvikwereti zvinopfuura 1% zvevhoti dzekuvhota, iwe uchida ...
Dhiyabhorosi. Nzira yekupikira zvakajeka kopi yemutemo wehurumende yepamutemo? Ndatenda mberi. Kana uchida kopi isina kubvamburwa, tora kopi yeSitatimendi pane imwe peji (serkh kurudyi) uye isa chigamba chepepa ...
nyora chikumbiro kudare pakuziva zvikanganiso zviri magwaro unofanira kunyora kushandiswa kugadza chokwadi unobva ane zita Gwaro Pano ndozvakanga Mharidzo: Dare ________________________ munhu akanyorera: ___________________ ______________________________ ...
Ndechipi musiyano pakati pekushandisa uye kushandiswa? ichi chikamu chechirevo che PROPERTY 1) muridzi we 2) uchishandisa 3) kurongedza chete pamwe chete kuumba pfuma yakarurama, uye mumwe nomumwe haaiti chero chinhu. nhaka-pachedu pachake pamutemo ...
Chii chinonzi EGRUL?
Chii chinonzi Yakabatana Nyika Nyorero yeMutemo Masangano? Mune Yakabatana State Register yeMutemo ...
Mibvunzo ye53 mu database yakagadzirwa mu 0,792 masekondi.